တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အချောဆုံးမင်းသား ၁၀ ဦး အကြောင်း | News Bar Myanmar
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အချောဆုံးမင်းသား ၁၀ ဦး အကြောင်း
တရုတ်လူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်ပေမယ့် မျက်ခုံးမျက်လုံးကောင်းကောင်းနဲ့ အနောက်တိုင်းဆန်ဆန်ခန့်ညားတာကြောင်​့ သူ့ကိုမကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတာ မရှိသလောက်ကိုရှားပါတယ်။ ခန့်ညားတဲ့ မျက်နှာအပြင် မြင့်မားတဲ့အရပ်ကလဲ သူ့ကိုဆွဲဆောင်မှုပိုစေတာပါ။
9. Darren Chen
အမြဲတမ်းပြုံးနေတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ ပါးချိုင့်လေးပေါ်အောင်ပြုံးပြတတ်တဲ့အပြုံးဟာ သူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုပါ။ အသက်ကတော့ ၂၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ်​့ အခုထိဆယ်ကျော်သက်ကလေးလို နုဖတ်နေတာကြောင့် အများကအားကျရပါတယ်။
မျက်လုံးမှေးမှေးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းသလို ယောကျ်ားပီသတဲ့ ရုပ်ရည်လဲရှိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ ခက်ထန်တဲ့အသွင်နဲ့ သရုပ်ဆောင်တာများပေမယ့် အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေမှာလဲ သွားတက်လေးပေါ်အောင် ပြုံးပြီးရိုတတ်သူပါ။
7. Dylan Wang
အသက် ၂၂ နှစ်သာရှိသေးပေမယ့် ရင့်ကျက်တဲ့အသွင်မျိုးနဲ့ ဆွဲဆောင်အားပြင်းတဲ့မျက်လုံးတွေ ရှိပါတယ်။ အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ မျက်နှာအပြင် မြင့်မားတဲ့အရပ်ကြောင့်လဲ ဘယ်နေရာသွားသွား အများကြားမှာ ထင်းလင်းနေတတ်တာ သူ့ရဲ့အားသာချက်ပါ။
Love O2O ဇာတ်လမ်းနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရင်းနှီးခဲ့တဲ့ ဒီမင်းသားလေးကတော့ အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့အသွင်နဲ့ ကြာကြာကြည့်လေ ယောက်ျားပီသလေဆိုတဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မိန်းကလေးတွေရဲ့ အသဲစွဲပါ။
5. Lin Yi
လူငယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေ အရိုက်များတဲ့ ချစ်စရာမျက်နှာလေးနဲ့ ကောင်လေးကိုတော့ မသိတဲ့လူရှိမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ အပြစ်ကင်းတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ ရယ်လိုက်ရင်ကလေးလေးလို ဖြူစင်သွားတာကြောင့် အားလုံးရဲ့ အချစ်တော်လေးပါ။
Go go squid စီးရီးနဲ့ တစ်ဟုန်ထိုးအောင်မြင်လာတဲ့ သူကတော့ စစချင်းမှာအရမ်းမချောသလိုထင်ရပေမယ့် သေချာကြည့်ရင် ဆွဲဆောင်မှုအရမ်းရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ အပြင်မှာတွေ့ဖူးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကတော့ အပြင်မှာ ပိုတောင်ချောပါသေးတယ်တဲ့။
3. Wang Yi Bo
ပရိတ်သတ်တွေအသဲစွဲ The Untamed သရုပ်ဆောင်လေး Wang Yibo ကတော့ ဘယ်လိုနေနေချောတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိမှာပါနော်။ ချောမောတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ ဘာဝတ်ဝတ်လိုက်ဖက်တဲ့ အရပ်အမောင်းကတော​့ အားကျစရာပါ။
2. Jackson Yi
အသက် ၂၀ တောင်မပြည့်သေးပေမယ့် ခန့်ညားတဲ့ရုပ်ရည်နဲ​့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်နှာအပြင် ထူးခြားတဲ့ဖက်ရှင်အပြင်အဆင်ကြောင့် နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသဲစွဲပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ TF Boys ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး အခုတော့ ခပ်မိုက်မိုက်ပုံစံဖြစ်နေပါပြီ။
အသားညိုညို ပိန်ပိန်ပါးပါးနဲ့ အေးချမ်းတဲ့ရုပ်သွင်လေးရှိတဲ့ Xiao Zhan ကတော့ ဒီစာရင်းရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာ နေရာယူထားပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကြည့်ကြည့် အေးချမ်းပြီး ချောမောပြေပြစ်နေတာမို့ အချောဆုံးမင်းသားလို့ ပြောရင်လဲမမှားပါဘူး။
တရုတ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းပရိတ်သတ်တွေလဲ ဒီစာရင်းထဲမှာ ကိုယ်အားပေးတဲ့ မင်းသားက နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာ ပြောပြသွားပါဦးနော်။
Next တရုတ်အစိုးရကတောင် ရိုက်ကူးခွင်တွေပိတ်ပင်လိုက်တဲ့ထိ ဖြစ်လာတဲ့ Ruyi’s Royal Love in the Palace: 2019 (Movie Review) »
Previous « ရရှိထားသောအမြင့်ဆုံး Rating ကိုပင် ထပ်မံစံချိန်ချိုးခဲ့သော The world of the married ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ ဇာတ်သိမ်းပိုင်း